အမေးအဖြေများ | ANHUI TANGRUI AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO ။ , LTD
၁။ သင်၏အဓိကလျှောက်လွှာနေရာမှာဘာလဲ။ ပြုပြင်ထားသောယာဉ်များ (သို့) အရပ်ဘက်ယာဉ်များ။
2. မည်သည့်အရည်အချင်းသို့မဟုတ်လက်မှတ်? နှင့်အဓိကပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း tools များ?
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်: IATF16949 စမ်းသပ်ကိရိယာများ - သုံးတူလီနင်သြဒီနိတ်များသည်တိုင်းတာခြင်းတူရိယာ၊ X-RAY, GENERTATORS, Metallographic detector, spectrograph စသည်တို့နှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားပေါင်း ၂၀ ကျော်သည်တစ်လလျှင် R&D ဖြစ်နိုင်သည်။
TT, USD / ယူရိုတွင် ၆ လကြာပြီးနောက်အကြွေးရက်ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်
4. သင်၏စံထုပ်ပိုးမှုနည်းလမ်းကဘာလဲ။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန်ရရှိနိုင်ပါသလား။
သစ်သား ctn, opp အိတ်၏အတွင်းဘက်၊ အပြင်ဘက်တွင် pallet အတွင်းရှိ။ OEM & ODM ကိုရရှိနိုင်သည်။
Tangrui သည်စတီယာရင်စနစ်နှင့်ဆိုင်းငံ့ခြင်းမှထုတ်သည့်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် Lifetime Replacement Warranty အပါအ ၀ င်ထုတ်ကုန်အားလုံးအပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောအာမခံချက်များပေးသည်။
တန်ဂရိုင်း၏ပြန်လည်ပတ် ၀ န်းကျင်မူဝါဒကိုဤနေရာတွင်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အား 0086-553-2590369 သို့ခေါ်ဆိုပါ။
၁။ Tangrui ထုတ်ကုန်ကိုဘာကြောင့်ဝယ်တာလဲမင်းရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ကဘာလဲ။ ဘယ်စျေးကွက်နှင့်ဖောက်သည်များကိုသင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသနည်း။
Tangrui သည်နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်စတီယာရင်စနစ်နှင့်ဆိုင်းထိန်းစနစ်ကိုအထူးပြုခဲ့ပြီး Toyota၊ Honda၊ Kia၊ Nissan၊ Ford, Buick, Chevrolet, Renault, Geely, Chery, BYD စသည်တို့ကိုတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ အဓိကထုတ်ကုန်များတွင်စတီယာရင်၊ လက်မောင်း၊ , ဘောလုံးကိုအဆစ်, ဘီးအချက်အချာ။
အဓိကစျေးကွက် - မြောက်အမေရိက
၂။ ကုန်ပစ္စည်းအသစ်၏ Moq ကဘာလဲ။
300 အစုံ, သိုလှောင်ပစ္စည်းကိုမကန့်သတ်လျှင်။
သင်၏စတော့ရှယ်ယာကို item puchase ဖို့ဘယ်လို?
၁။ ကျွန်ုပ်၏မှာကြားမှုကိုမည်သူ့ထံသို့ (မည်သူဖြင့်) တင်ပို့သလဲ
သင်၏အမှာစာကိုပို့လိုက်သည်နှင့်သင်ပို့ခြင်းအတည်ပြုသောအီးမေးလ်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ သင်၏အော်ဒါမှာယူသောအခါသင်ရိုက်ထည့်လိုက်သော emai သို့ပို့ပါ။ Statu ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ aoocunt manger နှင့်လည်းကြည့်ရှုနိုင်သည်။
မှိုပွင့်လင်းကာလ, မှိုအခကြေးငွေစသည်တို့ကို icluding သစ်ကိုမှိုပွင့်လင်းကာလ 40-60 ရက်, အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် 35-45 ရက်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချိန် 30-45 ရက်။
သင်၏ဒေသခံစျေးကွက်တွင် ၆ လတာကာလအတွင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြန့်ချိသူများသို့မဟုတ်ကားအစိတ်အပိုင်းများကိုတစ်စုတစ်စည်းတည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
ရှေ့ ဦး စွာစတီယာရင်လက်, ဘီး Hub, Shock Absorber Rubber, ပါးပျဉ်း Shock Absorber, တာယာဘောလုံးပူးတွဲ, Shock Absorber Bolt သည်,